Nooca Dhalada Shiinaha Wareegta-qulqulka Towers Soosaaraha iyo Alaab-qeybiye | Yubing
Biyaha kulul ee la qaboojinayo waxaa loo tuuraa dusha sare ee munaaradda qaboojinta iyada oo loo sii marinayo tuubooyin. Biyahaani waa loo qaybiyaa loona qaybiyaa dusha sarrifka kuleylka biyo mareenada qaybiya cadaadiska hooseeya.
Taageeraha ayaa afuufaya, hawada cusubi waxay galeysaa qaybta hoose ee unugga munaaradda qaboojinta furan waxayna uga baxaysaa qaybta kore ka dib markay kululaato oo ay dheregto iyadoo la marayo dusha sarrifka diiran
Natiijada xiisadda dusha sare, dusha sarrifka dartiis, biyuhu waxay ku faafaan si isku mid ah, waxay hoos uga dhacaan dhererka oo dhan. Dusha sarrifka ayaa markaa la kordhiyaa.
Biyaha, qaboojiyay mahadcelinta hawo qasabka ah, waxay ku dhacdaa berkadda xaggeeda hoose ee munaaradda. Kadibna biyaha ayaa laga dhuuqayaa miiraha. Joojiyeyaasha faquuqa ee ku yaal hawo-mareenka waxay yareeyaan khasaarooyinka daadashada.
Nooca dhalada ka soo horjeedka qulqulka qulqulka qulqulaya ayaa qaatay qalab hufan oo is-beddelaya oo damiya si uu ugu qaybiyo biyaha si siman taaradda dhexdeeda. Tani waa tan ugu caadiga ah uguna dhaqaalaha badan munaaraddii qaboojinta tan iyo jiritaanka munaaradaha qaboojinta. Sanduuqa Fiberglass-ka ee la xoojiyay (FRP) waa qaab wareegsan sidaasna looga takhalusi karo shuruudaha meelaynta gaarka ah mana saamaynayso jihooyinka dabaysha ee jira. Qaabkani wuxuu ku habboon yahay baahiyaha qaboojinta yar, laga bilaabo 5 HRT (kuleylka diidmada kuleylka) illaa 1500HRT. Taxanahan munaaradaha qaboojinta ku habboon yihiin guud ahaan codsiyada HVAC iyo qaboojinta habka wax soo saarka kala duwan.
Waxtarka sare iyo waxqabadka
Khafiif & adkeysi
Ikhtiyaarrada buuqa hoose ayaa la heli karaa
Hore: Dabaqyo Qabyo ah oo Iskutallaab ah oo lagu Wareejinayo Dhismayaal loogu talagalay Jiilka Korantada, HVAC ballaaran iyo Xarumaha Warshadaha
Xiga: Dhismayaasha Qaboojinta ee Qabsashada leh oo Muuqaal ahaan Leh
Munaaradda qaboojinta ee FRP
munaaradda qaboojinta furan
nooca munaaradda qaboojinta
Nooca dhalada wareega wareega
Dareemo Qabyo ah oo Iskutallaab ah oo Iskudhaf ah oo loogu talagalay Tamarta Awoodda ...